(src)="1.1"> Chili : Mpianatra namoaka lahatsary fohy momba ny " fitandrohana "
(src)="1.2"> Namoaka andian-dahatsary fohy ny mpianatra avy amin 'ny sekoly Shiliana lahy Las Cumbres ; ary tafiditra amin 'izany ny resaka fitandrohana ( herisetra ) sy famonoantenan 'ny tanora izay mifarana amin 'izao filazana izao :
(src)="1.1"> Japana : Nodimandry i Kazuo Ohno , fanta-daza amin 'ny Butoh
(src)="1.2"> Kazuo Ohno , manan-talenta fanta-daza ary iray amin 'ireo ray mpamorona ny Butoh , dia nodimandry tamin 'ny 1 Jona teo amin 'ny faha-103 taonany .
(src)="1.3"> Ampahany amin 'ny tantaram-piainany nomen 'ny Kazuo Ohno Dance Studio :
(src)="1.4"> Rehefa mandihy izy dia mampitombo hery ny tenany ihany .
(src)="1.5"> Tonga olona mpanome hery ny hafa ilay lahiantitra iray toy ny olon-drehetra ihany .
(src)="1.6"> Izany no antony itiavan 'ny olona mifanerasera amin 'i Kazuo .
(trg)="3.4"> لوگ اسکی وجہ سے کزو کے تصادم سے پیار کرتے ہیں ۔
(src)="1.7"> Niaina fotoana ela izy , ary nanohina mafy ny atifon 'ny olona .
(src)="1.8"> Kazuo Ohno dia mpanakanto izay nampitombo ny fahefa-manaon 'ny olombelona .
(src)="1.9"> Ny Butoh dia dihy fiomanana niforona tany Japana taorian 'ny Ady Lehibe Faharoa , miavaka amin 'ny fandokoana ny vatana ho fotsy sy ireo fihetsika maneho hevitra sy fijaliana .
(trg)="4.6"> سفید جسم روغن اور خیال ، تشدد کی نقل و حرکت سے اسکی امتیازی و صف کی گئ ہے ۔
(src)="2.1"> Ity manaraka ity dia horonantsary avy amin 'ny " Beauty and Power " antsoina hoe " Talanjona manoloana an 'i La Argentina " .
(trg)="5.1"> یہ کلپ ” بیوٹی اینڈ پاور " جو کہ ” ارجنٹا ئن لا توصیفی کہلاتی ہے " ۔
(src)="2.2"> Notarihan 'ilay lehilahy iray hafa namorona ny Butoh , Tatsumi Hijikata ary naseho voalohany tamin 'ny 1977 , ity tantara ity dia fanomezam-boninahitra an 'ilay mpandihy Espaniola Antonia Mercé ( fantatra amin 'ny hoe " La Argentina " ) , izay nojeren 'i Ohno an-tsehatra tamin 'ny 1929 fony izy vao 22 taona .
(trg)="5.2"> سے لیا گیا ہے ۔
(trg)="5.3"> جو کہ بانی بٹھو کہ ساتھی تتسمی ہجکاتا کی طرف سے پیش کیا گیا ۔
(src)="3.1"> Maro ireo nahatsiaro ny fotoana nahitany an 'i Ohno mandihy sy ny nanamarika azy ireo tamin 'izany .
(trg)="6.1"> کئی بار انہوں نے اہنو کی کار کردگی کا مظاہرہ دیکھا ۔
(trg)="6.2"> اور کس طرح یہ ان پر عیاں اور اثر انداز ہوا ۔
(src)="3.2"> Michiko Murayama ao amin 'ny blaogy True Colors , tamin 'izy nahita voalohany an 'i La Argentina , am-polontaonany maro lasa izay :
(trg)="7.4"> ایسے لگتا تھا کہ جیسے جسم کی روح اور پگلاہٹ خلاء کی انتہاہ کو پھیل گئی ہو ۔
(src)="1.1"> Maneran-tany : Tsy matoan-dahatsoratry ny fampahalalam-baovao ny fiparitahan 'ny solitany
(src)="1.2"> Misarika ny fifantohan-tsain 'izao tontolo izao ilay fiparitahan 'ny solitany tany amin 'ny Elodranon 'i Meksika , vokatr 'izay fanapotehana noho ny tsy fahaiza-mitantana ny fitrandrahana solitany .
(trg)="1.2"> میکسیکو کی خلیج میں المناک تیل بکھرنے کی بربادی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوی ہے ۔
(src)="1.3"> Na izany aza , any amin 'ireo toerana sasany maneran-tany , miaina miaraka amin 'ny fandrarahana poizina toy itony ny olona , ary amin 'ny alalan 'ny horonantsary no hiezahan 'ny vahoaka hisintonana ny sain 'izao tontolo izao amin 'ny fijalian 'izy ireo .
(src)="2.1"> Nizeria :
(src)="3.1"> Ny mponina any Nizeria dia tsy maintsy niaina niaraka tamin 'ny fandotoana avy amin 'ny solitany ao amin 'ny Delta-n 'i Niger efa am-polo taonany maro izao , nefa ho fanampin 'izay , efa niainan-dry zareo ihany koa ny fanaovana zinona ny zon 'olombelona izay namoizana ny ain 'ireo mafa fo manohitra ny fandotoana ateraky ny solitany .
(src)="3.2"> Nanenjika an 'i Shell ny vahoaka ( izay mitantana ny fitrandrahana solitany any amin 'ilay faritra ) ary vao haingana tamin 'ity volana ity no nanaiky handoa $ 15,5 tapitrisa ny Shell talohan 'ny fitsaràna .
(src)="3.3"> Ho ampiasaina hanonerana ireo mafana fo mpiaro ny zon 'olombelona io vola io ary hananganana tahirim-bola azo antoka .
(src)="3.4"> Nefa dia tsy mbola ahazoam-bokatra ny fitsaràna ny fanimbàna ara-tontolo iainana satria raha ny ambaran 'ny fikambanana , ny dikan 'ny hoe " fanadiovana " dia ny fanodinana ny tany mba tsy hahitàna soritra intsony ny solitany , fa dia mbola ao izy e , mandoto ny ambanin 'ny tany sy mahatonga ny vahoaka harary , ary tsy mbola misy ny fepetra noraisina momba ireo jiro arehitra tsy an-kiato amin 'ny solitany .
(src)="4.1"> Egipta :
(src)="8.1"> Venezoela :
(src)="9.1"> Etazonia :
(src)="10.1"> Toeran-kafa , Loza hafa :
(src)="11.1"> Toa izao ny haino aman-jery vao mifantoka amin 'ny fiparitahana solitany , ary raha hiverenana ny tamin 'ny 2005 dia nahatonga ilay Taiwanais mpitoraka blaogy Munch hamporisika ireo mpamaky azy hiantso any amin 'ireo biraon 'ny hainoamanjery mba hijery ny fiparitahana solitany any akaikin 'ny nosy Lanyu any Taiwan .
(src)="12.1"> Eo am-panadiovana ny Fiparitahana Solitany any Taiwan , sarin 'i Munch
(src)="13.1"> Nefa tsy ny solitany ihany no manapoizina ny tontolon 'ny an-dranomasina .
(src)="13.2"> Tamin 'ny 2009 , nisy sambo nitatitra " phosphate " nilentika tany amin 'ny morotsirak 'i Madagascar ary nisy fiatraikany teo amin 'ny zavaboary ny fanapoizinana , anisan 'izany ireo trozona mpifindra monina sy ireo mpanjono marary noho ny rano voapoizina eny amin 'ny moron-drano .
(src)="14.1"> Toa na firy na firy taona lany amin 'ny asa fitrandrahana solitany , tsy mitombo manaraka ny filàna mampiasa sy mandany solitany ny fandraisana fepetra hahazoana toky fa tsy mandoto tontolo iainana manodidina ny toerana fitrandrahana na fantsona ny solika avy amin 'ny toeram-pitrandrahana .
(src)="14.2"> Angamba tokony hamerina handinika tsara ny fampiasantsika solitany isika ary mangataka fanomezan-toky avy amin 'ireo orinasa mitrandraka izany .
(src)="1.1"> Global : Teny Grika mankany amin 'ny teny Anglisy , teny Sinoa mankany amin 'ny teny Rosiana , ary teny Espaniola mankany amin 'ny teny Masedoniana
(src)="1.2"> Samy efa nandre ireo zava-mahatsikaiky mitranga isika rehefa lasa mampihomehy ny fandikana ireo fomba fitenin 'ny teny iray avadika amin 'ny teny hafa .
(src)="1.3"> Ny fandikana ireo teny sarotra ireo dia anisan 'ireo fifaninanana lehibe indrindra ao anatin 'ny fandikan-teny , na ho an 'ny olombelona izany na ho an 'ireo solosaina .
(src)="1.4"> Ny tena olana dia mitoetra eo amin 'ny toetra / endrika ara-haintenin 'izy ireny , ary tsy afaka avoaka avy amin 'ny fitambaran 'ireo teny mandrafitra azy ny dikany .
(src)="1.5"> Ohatra , ny ohatra tontan 'ny fiteny Anglisy ' to kick the bucket , ' ara-bakiteny midika hoe ' maty ' , dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin 'ny daka na amin 'ny tavin-drano .
(src)="2.1"> WikIdioms dia loharano ao amin 'ny aterineto vaovao miezaka manampy ireo mpandika teny handresy izany olana izany .
(src)="2.2"> Niresaka tamin 'ny mpamorona ity vohikala ity , Pavel Kats , sy tamin 'ny iray amin 'ireo mpanampy azy , Yasna Trandafilovska , izahay ka dia afaka izy ireo noho izany nanazava ny fiasan 'izany tamin 'ny fomba raitra .
(src)="3.1"> Q : Pavel , afaka ampahafantarinao anay amin 'ny alalan 'ny fehezanteny fohifohy ve ny Wikidioms ?
(src)="3.2"> A : Eny , ny hevitra fototra dia ny hanomezana tontolon 'ny vohikala ahafahan 'ny olona manampy ny hafa ho tafavoaka amin 'ny fandikana ireo teny ireo , mety ho iray amin 'ireo olana lehibe mikasika ny fandikan-teny .
(src)="3.3"> Mazava ho azy , rehefa miteny aho hoe ' mandika ny oha-pitenenana iray , ' tsy midika izany hoe fandikana ara-bakiteny , fa fiteny mifandanja amin 'ity teny nadika ity , na fomba hafa hahazoana ny dikanteny mitovy aminy .
(src)="3.4"> Ity tetikasa ity dia hiaraha-miasa , izay no nisafidianana ny vohikala ho toerana tsara anaovana izany .
(src)="3.5"> Q : Ahoana ny fandaminana ny fikambanana ?
(src)="3.6"> A : Maro amin 'ireo mpikambana amin 'ny fikambanana no mpandika teny matihanina izay manana fotoana malalaka tsy iasany ahafahany manampy anay .
(src)="3.7"> Ireo olona ireo dia tena mahalala ireo olana amin 'ny fandikana ireo oha-pitenenana , satria dia mahita izany foana izy ireo .
(src)="3.8"> Nefa tsy mametra ny ireo mpanampy ireo mpandray anjara ho amin 'ny mpandika teny gotsiny izahay , ary dia nahita fandraisana anjara lehibe avy amin 'ireo mpankafy ny fiteny izay tsy misy ifandraisany amin 'ny asan 'ny fandikan-teny .
(src)="3.9"> Jereo , maro ireo olona te-handresy ireo olana eo amin 'ny fiteny rehefa mikasika ny tenin-drazany izany ..
(src)="3.10"> Q : Afaka manome tahan 'isa kely anay ve ianao ?
(src)="3.11"> Firy ireo mpandray anjara , firy ny fiteny …
(src)="3.12"> A : Ny fitambaran 'ny fandraisana anjara aloha amin 'izao dia eo amin 'ny mpandika teny 100 no mihoatra eo , ary mbola mitombo .
(src)="3.13"> Mbola vao tanora kely ity tetikasa ity , nefa amin 'izao dia afaka mirehareha ho efa namoaka fomba fiteny mihoatra ny 30.000 avy amin 'ireo teny mihoatra ny 30 .
(src)="3.14"> Ary ny lanitra no fetra …
(src)="3.15"> Q : Iza no afaka manampy ny vohikala ?
(src)="3.16"> A : Araka ny voalazako tery ambony dia tsy voafetra ny isan 'ny mpanampy , noho izany dia afaka manampy daholo ny rehetra .
(src)="3.17"> Raha ny tokony ho izy , ny politika amin 'ny toy izao dia mitaky fahaizana mandrindra ny zavatra ao anatin 'ny fandraisana anjara ary ity fandrindràna ity dia ataon 'ireo mpikambana maro ao amin 'ny fikambananay .
(src)="3.18"> Manasa ireo mpandika teny matihanina te-hanampy mihoatra ireo noho ireo fandraisana anjara eny antsefantsefany eny ihany koa izahay mba hifandray mivantana aminay .
(src)="3.19"> Betsaka ny tetikasa manokana , mifandraika daholo amin 'ny asa fandikana teny marolafy izay volavolainay ao anatin 'ny WikIdioms , ary mitady mpanohana izahay .
(src)="4.1"> Q : Inona no antony ampiasàna ny vohikala ?
(src)="4.2"> A : Ohatra iray tena mety tsara ity .
(src)="4.3"> Eritrereto hoe mandika lahatsoratry ny Global Voices amin 'ny teny Anglisy mankany amina teny hafa ianao ary ahitana fomba fiteny iray ‘ It ’ s Greek to me ! ’ izay ny tena heviny ao anatiny dia tsy mazava amin 'ilay mpiteny ny hevitra sasany ao amin 'ny lahatsoratra .
(src)="4.4"> Ahoana no ahafahanao mahazo ny dika mitovy aminy amin 'ireo teny hafa avy amin 'ny hevitra sahala ?
(src)="4.5"> Amin 'izao , miaraka amin 'ny fanampian 'ny WikIdioms dia fantatrao fa manana ny fombany ihany koa ireo teny hafa ireo hanehoana hevitra sahala : Ireo Rosiana mitaratra amin 'ny Sinoa ary ireo Masedoniana … .amin 'ny Espaniola !
(src)="4.6"> Misaotra , Pavel !
(src)="5.1"> Q : Yasna , ahoana no nahatonga anao nirotsaka tao amin 'ny Wikidioms ary ny antony ?
(src)="5.2"> A : Ny firotsahako tao amin 'ny WikIdioms dia nilatsaka avy tany an-danitra rehefa nandefa mailaka mikasika ny fitadiavan 'i Pavel mpandika teny hanampy ny WikIdioms tamiko ny namako Grika iray .
(src)="5.3"> Efa nisinisy ihany izay no niasako ho mpandika teny , ary voamariko fa rehefa avy amin 'ny teny Masedoniana , dia tena sarotra ny mahita ireo loharano sy diksionary ao amin 'ny aterineto afaka manampy ireo mpandika teny rehetra hamita ny asany haingana , madio ary tsara .
(src)="5.4"> Noho izany dia tonga saina aho fa tombontsoa lehibe entina hanovàna ny zava-misy izany .
(src)="5.5"> Nefa , satria tsy ho vitan 'olon-tokana ny mahafantatra ny zava-drehetra ary satria miaina ny teny rehetra ary miovaova sy mivoatra hatrany , dia manasa ireo namako rehetra aho , ary indrindra indrindra fa ireo ekipan 'ny Global Voices Lingua maneran-tany , mba hitsidika anay ary hanampy anay .
(trg)="9.9"> اور کیونکہ زبانیں نامیات ہیں ۔
(src)="5.6"> Q : Mpanampy ny Global Voices amin 'ny teny Masedoniana ihany koa ianao , afaka milaza aminay ve ianao hoe ahoana no nahitanao ity tetikasa ity ary inona no nanosika anao hirotsaka tamin 'izany ?
(src)="5.7"> A : Nipetraka tany Grece aho efa 11 taona izao .
(src)="5.8"> Satria Grika ny vadiko , ao antrano izahay dia miteny Grika .
(src)="5.9"> Nandeha teny ny fotoana , tonga saina aho fa toa nanomboka adinoko ny tenin-drazako ary tena nahasorena izany .
(src)="5.10"> Nanomboka nikaroka vahaolana aho ary nahita izany raha nandika lahatsoratra maromaro tao amin 'ny Global Voices .
(src)="5.11"> Mihevitra aho fa mamporsika izany satria tsy misy fe-potoana amin 'izany , tsy misy rarin-tsaina , tsy misy hazakazaka ary mihevitra aho fa rehefa manao zavatra ianao noho ny fitiavanao izany fotsiny ihany , ny vokany dia tena tsara , tena tsara lavitra mihitsy .
(trg)="10.4"> اور یہ بہت تکلیف دہ تھا .
(src)="5.12"> Yasna Trandafilovska dia nanampy tamin 'ny fanoratana ity lahatsoratra ity .
(src)="1.1"> Oganda : Maneho hevitra momba ireo baomba nipoaka ny mpitoraka blaogy
(src)="1.2"> Nifamory tany amin 'ireo trano fisotroana sy trano fisakafoanana ireo mpankafy baolina kitra manerana an 'izao tontolo izao mba hijery ny lalao farany amin 'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany omaly alina .
(src)="1.3"> Any Oganda , niato ireo fankalazana ireo rehefa nipoaka ny baomba tamin 'ireo toerana roa malaza amin 'ny fivoahana amin 'ny alina ao Kampala , renivohitry ny firenena .
(src)="2.1"> Mitatitra ireo haino aman-jery Ogande fa mihoatra lavitra ny 40 ny olona maty , miampy ampolony any ho any naratra tamin 'ireo fipoahana .
(src)="2.2"> Nihevitra ireo polisy Ougande fa ny milisy Somaliana avy amin 'ny vondrona al-Shabab no tao ambadiky ny fanafihana .
(trg)="2.2"> یوگنڈا کی پولیس نے یہ تجویز پیش کی کہ صومالی عسکریت پسند گروپ القاعدہ شباب - ان حملوں کے پیچھے تھا ۔
(src)="2.3"> Ny iray amin 'ireo mpibaiko ilay vondrona dia niantso tsy ela akory izay fanafihana an 'i Oganda , izay mandray anjara amin 'ny fanmpandian-tany ataon 'ny Tafiky ny Firaisambe Afrikana any Somalia .
(trg)="2.3"> گروپ کے کمانڈروں میں سے ایک کو حال ہی میں یوگنڈا کے خلاف حملوں کے لئے بلایا گیا ، جو کہ صومالیہ میں افریقی یونین کی امن فوج کے لئے فوجیوں کو کنٹربیوٹ کرتا ہے ۔
(src)="2.4"> Nidera ireo fanafihana ilay vondrona fa tsy nilaza kosa ho tompon 'andraikitra .
(src)="4.1"> Ireo olona niharan 'nyfipoahan 'ireo baomba roa nahafaty tany Kampala miandry ny fitsaboana ao amin 'ny hopitalin 'i Mulago .
(src)="4.2"> Sary avy amin 'i Trevor Snapp .
(src)="4.3"> Nampiasaina nahazoana fanomezan-dàlan 'ny mpaka sary .
(src)="5.1"> Manoratra i Gay Uganda , mpitoraka bilaogy Ogande iray :
(src)="6.1"> Voatafika i Oganda .
(src)="6.2"> Marina e , tena fanafihana ny maha-olombelona izy ity .
(src)="6.3"> Iza no mbola sahy ho faly amin 'ity zavatra mahatsiravina ity ?
(src)="6.4"> Raha ny fahitàna azy , ireo mpihoko Somaliana no faly .
(src)="6.5"> Satria miady amin 'ireo tafiky ny Firaisambe Afrikana any Somalia ry zareo , izay nakana azy ireo tamin 'ny fametrahany ny fanjakana Silamo fehezin 'ny lalàna Sharia . ....
(src)="6.6"> Ireo mpiray tanindrazana amiko no hitako , olombelona izay tsy manao zavatra ratsy mihoatra ny mijery baolina kitra no novonoina sy nanjary kilemaina , amin 'ny anaran 'ireo ' idéaux ' mety tsy ho takatry ny sain-dry zareo , hetsika izay tsy ho vitan 'izy ireo akory ny hifehy izay kely indrindra aminy .
(trg)="7.2"> میں نے ملک کے ساتھیوں کو دیکھا ، انسان جو کچھ برا نہیں دیکھ رہے تھے سوائے ایک فٹبال میچ کے ۔
(trg)="7.3"> جو کے مارے گئے اور معذور ہو گئے ، آدرشوں کے نام پر ، جسکے بارے ، میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ۔
(src)="6.7"> Mampitandrina i Ernest Bazanye mba tsy hitsambikinana aloha loatra hankamina tsoa-kevitra an-kamehana mikasika ireo izay nametraka ireo baomba :
(trg)="7.4"> ان کاموں پر جن پر وہ کم سے کم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں .
(src)="6.8"> Aloha loatra raha izao dia hiteny hoe iza no tompon 'andraikitra ary inona no antony , ary na dia re manako any ivelany aza fa karazana fanaovana vivery ny aina tamin 'ny baomba nataon 'i Al-Shahab , fikambanan 'ny mpampihorohoro Somaliana izany .
(src)="6.9"> Tokony ho fantatsika manombok 'izao fa tsy hipoitra vetivety ny marina ary lasa aloha loatra ireo tsoa-kevitra raha amin 'izao fotona izao .
(src)="6.10"> Tany amin 'ny hopitalin 'i Mulago i Trevor Snapp , mpaka sary fanadihadiana mipetraka any Kampala , izay nandraisana ireo niharam-boina , taorian 'ny fanapoahana baomba .
(src)="6.11"> Nanoratra izy :
(trg)="10.1"> خاندان کے اراکین ریسیپشن ایریا کے سامنے کھڑے تھے ۔